Khariidadda AutoCAD - Geofumadas
GeoCivil waa degel xiiso leh oo ku jihaysan adeegsiga qalabka CAD / GIS ee aagga injineernimada madaniga ah. Qoraaga, oo ah nin u dhashay dalka El Salvador, ayaa tusaale fiican u ah jihada ay fasallada dhaqameedku u lahaayeen - ugu badnaan - bulshooyinka barashada internetka; Shaki la'aan waa guul muhiim ah oo mahadda ...
Qoraalkan waxaan rabaa in aan isbarbardhig ku sameeyo qaababka loo kaydiyo keydka macluumaadka ee loo yaqaan 'AutoDesk' iyo 'Bentley geospatial platform'. Waxaan u adeegsaday tan: AutoDesk Civil 3D 2008 (oo ay kujiraan Khariidada AutoCAD) Bentley Map V8i AutoCAD Civil 3D 2008 Bentley Map V8i Connect: Faylka, ku xir xogta… Ku xirnaanta: Dejinta, keydka macluumaadka, ku xir
Aynu Caddeyno AutoCAD Noocee ah Uma jeedno Khariidadda AutoCAD ama Civil3D, oo ku xiran adeegyada OGC laakiin noocyada fudud ee AutoCAD 2007 wixii ka dambeeya, taasi waa, maaddaama ay leeyihiin shaqooyin jaangooyo ah. Aynu caddeynno ArcGIS: Kuma xirna Geodatabase ama mxd maxalli ah oo lagu kaydiyo Nor ama adeeg lagu abuuray dhaqan ...
In kasta oo xaqiiqda ah in AutoDesk ay ka tagtay taageeradeedii Linux muddo ka hor, sannadihii la soo dhaafay waxay dadaal u gashay inay soo laabato, waana sababta ay dhowaan ugu dhawaaqday iswaafajinta bayaankan. Nidaamka cusub ee Citrix XenApp Codsiyeynta Codsiyeynta wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha barnaamijyada AutoCAD Khariidadda 3D inay si fudud u abuuraan, u howlgeliyaan una maareeyaan ...
Map-ka AutoCAD AutoDesk
Bisha Nofembar, siminaarada AutoCAD 3D 2009D XNUMX waxaa lagu qaban doonaa magaalooyin kala duwan oo ku yaal Spain iyada oo xal loo helayo aagagga, Biyaha, Fayadhowrka iyo Aagga korantada. Waxa laga filan karo Muuqaalka Dhulka: Qalabka loogu talagalay abuurista, aragtida iyo falanqaynta moodooyinka dhulka, iyo sidoo kale qaabeynta iyo geeddi-socodka, ayaa la soo bandhigi doonaa ...
ERDAS ayaa hadda ku dhawaaqday qalab cusub oo loogu talagalay AutoCAD oo u oggolaanaya helitaanka sawirrada (ECW iyo JPEG 2000) iyada oo loo marayo borotokool la yiraahdo ECWP. ECW waa qaab faa iidooyin badan leh, inta badan iskudirida iyada oo aan tayo weyn lumin, maaddaama 200 MB tiff image culeyskiisu noqon karo 8 MB; aad…